600 XOG HOOSE:-Somaliland oo Doonaysa Inay Nabada Garaad Jaamac Garaad Cali Fashiliyaan, | khaatumo news online
Aug 11, 2020 - 13 Aragtiyood
Xaalada guud ee deegaanka Buuhoodle ayaa ahaa mid dagan kadib markii dhexda u xidhay garaad guud garaad Jaamac Garaad Cali oo aad ugu danqaday burburka lagu wado dadka dagan guud ahaan gobolada SSC, waxaana howshan ku howlanaa mudo dheer Maamulka Somaliland oo doonayay inay isku diraan beelaha dhulbahante si loo qabsado deegaankooda,
Qarshahan oo la dajiyay kadib dagaalkii kalshaale oo afka ciida loo daray maamulka uu hogaaminayaaySiilaanyo iyo Saleebaan Gaal.
Shaxadan ay dhigeen saraakiil SNM oo duulaan balaadhan ku ah deegaanka SSC, waxay u dhigeen shaxda oo ah sidii la isugu dir lahaa beelaahan.
Bahrasame iyo Khayr cabdi
Barkad iyo Cali gari
Reer Cilmi iyo Fiqishin
Reer hagar iyo Hayaag
Reerahaas ayaa guud ahaan wali colaadiid aan istaagin iyo kuwa wali ay socdaan dantii laga lahaan laga gaadhay kadib horgolo caado qaatayaal ah oo wali wada in dagaalku uu sii socodo.
Waxaa hada socda in maamulka Somaliland oo u wado inay fashilyaan nabadaas uu hogaamiyo garaad guud ee SSC oo doonay inayuu soo afjaro colaad mudo dheeraatay ee dhextaala Beelaha walaal ah Hagar iyo Hayaag.
waxaan la yaaba dhulbahnte intuu is xasuuqo ayuu meelo kala kula galgashaa oo yidhaahda somaliland baa ka danbaysaa haddii aanay ciidamada somaliland ku dhex jirin waa hore ayay is hadhamyn lahaayeen waa nasiib daro ninkii u soo gurmaday inay yidhaadaan isaga ayaa ma danbeeya
Maah-maah baa waxey tiraahdaa.
Maqli jirey maqasha soo celi.
Maxaad igaga daaleysaan berriba waan lumiyee.
Daawo garaadkii uugu cuqdadda, xumaanta iyo qabyaaladda badnaa ee ku oodnaa tuullada Saaxdheer oo yidhi anigaa sheekh iyo garaadba ah oo ducaynaya ee yaa ka aqbalay xayawaanka.
Dadka bani aadamka ahi xoolaha waxay kaga duwan yihiin waa caqliga, hadii aanu caqligu shaqaynayn waxa uu LA mid noqonayaa xoolaha. Waxaan uga jeedaa hadii qofku so cilmiyaysan aanu qoraalkiisa u habayn waa soda ninkan layiraahdo Yusuf, Islam dad boqradeen ayuu cay sidii jirada is daba dhigay, kan oo kale waa inaan kale in baraha lasoo ghigo mash. Waa need xoolo ah oo macaac Yuri.
Waryaadha runta ka sheega waxaa jira waa rag magaca Dhulbahante sita raga fashilinayaa waadna ogtihiin ee ragaa aaynu laayno dhiigeenaa iyo dheecaankeena cabaaya waana ragii xafudulaah xurmadle garaadka guud meelahaa ku caayi jirey. Hada qoladaa caaayn waay naga karti badan yihiin qoladayada reer Sool mana ogolaanayaan in Soomaliland waxaay Sool ku samaysey aay ku sanayso Caayn.
Marka laga saaro magaalada BUUHOODLE oo dhan walba ka go’odoonsan oo ay dawladdu diiday in ay ciidadu gudaha u galaan si aanay dadka shacabka ahi u qaxin inta kale oo dhan ee ku xeeran magaaladaa yar sida HORUFADHI, CEEGAAG, GOCONDHAALE iwl waxa jooga oo ka taliya ciidamada qaranka Somaliland. Sidaa awgeed, arrimuhu sida laguugu waramay maaha ee wax hubso yaa miskiin.
@ DALKU WAA DALKAYGII/HEES.COM
Waxaa hubaal AH oo Aan aniga iyo Indheer garadka ssc IYO TAN Soomali yeedba inaan OGNAHAY Cida kadanbeysey Colaadohii Bahrarsame IYO Khayr Candi TAN HADA JIRTA IYO TAN IYANA KASOO NOQ NOQOTA ADHI CADEEYE OO AAN ISHA KUHAYNO IYO TII HABAR JECLO IYO HABAR YOONISTA CEEL AF WAYN IN AY DHAMAANTOOD MAAMULKA JEEGAANTA OO DANO KALA DUWAN KALAHAA AY DHAMAAN SI TOOS AH IYO SI DADBANBA UGU LUG LAHAAYEEN WAXAANA TAAS CADAYN KUUGU AH TALIYIHII KAGADOODAY QAABDARADA IYO DULMIGII AY WADEEN MAAMULKA JEEGAANTA KORNAYL CAARE OO MARDANBE LASOO CARO CELIYEY WUXUU CADEEYEY INDHAMAAN COLAADIHII DHEX MARAY BAHARSAME IYO KHAYR CANDI OO WIIL IYO ABTIGII IYO AWOOWGII IYO INAADEERKII WAX WALBA OO LABA QOYS AY YIHIIN WADA AH IN SITOOS AH IYO SI DADBANBA COLAADAAS AY WADEEN MAAMULKA MUUSE BIIXI IYO INA KAAHIN OGOOW HA HAL MAAMIN KALSHAALE MAYGAAGLE HAGOOGANE TAASNA WAXAA WADAY MAAMULKII SNM OO UU UGU DA WAYN YAHAY SALEEBAAN GAAL OO AH GUDUMIYE GOLEHA GUURTIDA ISAAQA IYO SIILAANYO OO LABADUBA ISKU BEEL AH DONT FOR GED THAT GARAAD JAAMAC GARAAD CALI WAA ISINKA GUUD EE GOBALADA SSC WAANA INDHEER GARAD UMANA BAAHNA SHILIMAAN DADKIISA IYO DALKIISA LAGU GUMAADO GUUL IYO GOBANIMO GEESI GEESI DHALAY OO INDHEER GARAD AH GUULAYSO INSHA ALAAH OO ILAAHAY KOR HAKAA DHIGO ABID
Khaatumonews. Waxad hada noo sheegtay in isaaq isku diraayo dadkiina si colaad loo abuuro, hadaba waxad noo sheegtaa markii aad maqaalkan qoreyseen wixii aad adinku ka shaqeyneyseen ama ujeedkiinu ahaa?
asalaamu calaykum waar inaadeer ragga ilmaadeeradaa ah ee sharafta leh ee caqliga iyo maskaxda fiican leh maxaad u xaqireysaa ee horgal ugu leedahay ma ogola cidday ka dhasheen inaad caydaa ku tidhaa maanta hawiye hadday la socon lahaayeen sidaa umaad caydeen ee waa isaaqa dartii cid walba nacayb aan la garanayn meel uu ka yimid ay hayso,midda kale garaad jaamac muxuu mar walba la baxsanayaa ee uu dib u heshiisiinta itoobiya ula galayaa muu sida garaadka sharafta leh ee garaad jaamaca laascaanood hargaysa tago oo cuqdada iyo nacaybka isaaq iska daayo,soomaaliland shirqool ma waddo ee inay heshiiyaan cid waliba ayey doonayaan.
Ninkan waa nin dulaysan oo aan af soomaaliga aqoon. Isaga ayaa afkiisa iyo gacantiisa isku tooganaya. Ninkan reerka maaha, waan ku dhaaranayaa.
Khaatumanewsow, waa la i heystaa iyo waa la isku kaaya dirayaa, ma amaan baad moodey? Reerku intaas waa ka af wacnaan jirey ee yaad tahay? Ninkasta oo aan isaga iyo aabihiiba wax la weyn, wax baa la weyaa, waxna waa qoraa sida wiilkan oo kale.
Waxa aan la yaabay reerkan Isaaq la yidhaa ee aad habeen iyo maalin aad ka seexan weyday ee aad ku hadaaqayso. Reer Sheekh way ka weyn yihiin dad beelo isku dira. Dhulbahante 400 sannadood ee la soo dhaafay way wada noolayeen, wanaagna way ku wada noolayeen. Hal dal oo yidhaa British Somaliland Protectrate ayey ku wada dhaqanaayeen. Illaha weyn ayaa is baday. iyaga oo Somaliland inta ifka la joogo Somaliland ayey kuwada noolaanayaan. Waxa colaado kuu tarayso waan garan waayey. Reer Sheikh Isaxaaq wax aan wanaag iyo walaaltimo ahayn oo ay Dhulbahante u hayaan ma jirto. Ilaahay ha kaa daweeyo xanuun kan aad isaaq u bixisay ee ku haya.